Nayakhabar.com: भारतीय भुमीमै भारतलाई घुँटा टेकाउने यी हुन नेपाली नवयुग
भारतीय भुमीमै भारतलाई घुँटा टेकाउने यी हुन नेपाली नवयुग
२३ वर्षपछि नेपाललाई दक्षिण एसियाली फुटबलमा स्वर्ण पदक जिताउन फाइनलमा निर्णायक गोल गरेका नवयुग श्रेष्ठले सागको जितले बंगबन्धु चिट्ठा नभएको प्रमाणित गरेको बताए ।
सागमा स्वर्ण जितेपछि भारतको गुवाहटीमा कान्तिपुरका राजु घिसिङसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी जसरी पनि जित्न चाहन्थ्यौं, पहिलो हाफमा गोल खाए पनि मलाई हामीले जित्छौं भन्ने लागेको थियो । यो जितले बंगबन्धु चिट्ठा थिएन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।’ उनको खेलको विशेषता के छ ? कसरी बने खेलाडी ?
एक महिनामा तीन वटा ह्याट्रिक गरेका नवयुग गत महिना बंगलादेशको ढाकामा भएको बंगबन्धु गोल्डकपका पनि हिरो थिए । टुर्नामेन्टकै सर्वाधीक गोलकर्ता र मोस्ट भ्यालुएवल प्लेयर भएका नवयुगले सागमा पनि सर्वाधिक गोल गरे । सागमा उनले दुई वटा ह्याट्रिक गरे ।
यसै वर्षको भदौमा पुनेमा भएको भारतविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा पहिलोपटक नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका नवयुग नेपाल आर्मीको त्रिभुवन क्लबका खेलाडी हुन् ।
पाँच फिट ६ इन्च अग्ला नवयुग छरिता फुटबलर हुन् । सानो जीउडालका भएकाले पनि उनी निक्कै फास्ट खेल्छन् । उनको स्कोरिङ पनि राम्रो छ । विशेषगरी पेनाल्टी क्षेत्रनजिकबाट उनले लोभलाग्दा गोल गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय लिग २०७२ मा फरवार्डको भूमिका उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनले राष्ट्रिय टिममा स्थान पाएका हुन् । उनले राष्ट्रिय लिगमा सर्बाधिक १४ गोल गरेका थिए ।
प्रशिक्षक ध्रुव केसीले उनलाई जगजित श्रेष्ठको स्थानमा विङ्सबाट खेलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गराएका थिए । त्यसबेला नवयुगले भनेका थिए, ‘अब चाहि फरवार्डको भूमिकामा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाउने आस छ ।’ नेपालको गोलको खडेरी तोड्ने प्रयासमा बेल्जियन प्रशिक्षक प्याट्रिक ओसेम्सले उनको खुबी पहिचान गर्दै फरवार्डको भूमिकामा खेलाइहाले । राम्रो प्रदर्शन गरेपनि उनले यसअघिका ६ खेलमा गोल भने गर्न सकेका थिएनन् ।
मंगलबारेदेखि स्वर्ण पदकसम्म
इलामस्थित मंगलबारेका नवयुगले पोखरा–बुटवलमा २०६८ मा भएको राष्ट्रिय लिगमा सर्बाधिक ७ गोल गरेका थिए । त्यसबेला उनी फरवार्डको भूमिकामा मात्र थिएनन्, आर्मीका प्रशिक्षक योगम्बर सुवालले अट्याकिङ मिडफिल्डरको रुपमा पनि प्रयोग गरेका थिए । मिडफिल्डमा पनि राम्रै प्रदर्शन गर्दै आएपनि उनी कहिल्यै राष्ट्रिय टिममा परेका थिएनन् । यसपाली राष्ट्रिय लिगमा गरिएको प्रदर्शनले उनलाई चर्चा दिलाउँदै राष्ट्रिय टिमसम्मै पुर्यािएको हो । ‘उनमा गजबको स्कोरिङ क्षमता छ, जुन अहिलेका नेपाली फरवार्डमा कमै पाइन्छ,’ आर्मीका प्रशिक्षक मेघराज केसीले
नवयुगले राष्ट्रिय लिगमा पुलिसविरुद्ध ३–० को जितमा ह्याट्रिक गरेका थिए । तीनै गोल आकर्षक थिए । पोखरामा चार वर्षअघि भएको राष्ट्रिय लिगमा संगम क्लबलाई ५–१ ले हराउँदा उनी एक्लैले चार गोल गरेका थिए । २०६८ को राष्ट्रिय लिगपछि उनको प्रदर्शन औसत रह्यो ।
उनको भूमिका पनि एउटै थिएन, कहिले अट्याकिङ मिडफिल्डर त कहिले फरवार्ड । दुई वर्षयता बल्ल उनले चर्चित् फरवार्ड भारत खवाससँगै आर्मीको अग्रपंक्तिमा खेल्ने अवसर पाएका हुन् । यसवीच उनी चर्चामा नरहेपनि मैदानमा छाइरहेकै थिए ।
सानैदखि फरवार्डको भूमिकामा खेल्ने उनी २०६०–६१ को जिविस कपमा सहभागि हुन काठमाडौं आएका थिए । त्यसमा उनको टिम इलाम च्याम्पियन नै भयो । ‘त्यसैबेला खेलाडी बन्छु भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘एकचोटी न एकचोटी राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाउने सपना पाल्न थाले ।’
उनको खेल यू–१४ जिविस कप जितेपछि राम्रो हुन थालेको थियो । ‘इलाममै दुई साता ट्रेनिङ गरेपछि जिविस कप खेलेका थियौं । यसैले मेरो स्तर बढायो,’ उनले भने । स्थानीय त्रिवेणी युवा क्लबबाट भारतको सीमावर्ती मिरिक र दार्जिलिङमा खेल्दा टिमको सबभन्दा कान्छो खेलाडी उनी नै हुन्थे ।
झापाका फरवार्ड विशाल राई ‘ए’को खुबै प्रशंसा गर्ने उनी प्रवेशिका परीक्षापछि राजधानीको लिग खेल्ने धुनमा उनी क्लबहरु चहार्न थाले । उनले एपीएफमा ४५ दिन ट्रेनिङ गरे । ‘सी’ डिभिजन खेल्न टोखा क्लबसँग पनि अभ्यास गरे । तर, उनी एन्फाका उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा आफैले भनेपछि ‘बी’ डिभिजन खेल्न पाउने आसमा टोखाबाट नखेल्दै हिमालयन शेर्पा क्लबमा पुगेका थिए ।
हिमालयन शेर्पा ‘बी’ डिभिजन लिग उपविजेता हुदै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लियो तर नवयुगले त्यहाँ मैदानमा ओर्लने अवसर नै पाएनन् । उनले खेल्न पाउने आसमा सँधै बेन्चमा बिताए । त्यसबेला उनको खेल राम्रो स्तरको पनि थिएन । ‘मभन्दा राम्रा खेलाडीहरु टिममा थिए र उनीहरु खेलेकोमा नै चित्त बुझाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने । ‘बी’ डिभिजन सकेपछि उनी घर फर्किए । उनी साथी सरोज श्रेष्ठसँगै नेपाली सेनामा भर्ती हुन धनकुटा पुगे । उनी पास भए, सरोज भएनन् ।
आर्मीमा बनेको करिअर
२०६५ सालमा भर्ती भएपछि दुई नम्बर बाहिनी हिलेमा सैन्य तालिम गर्दागर्दै नवयुगलाई पृतना ट्रफि खेल्न इटहरी पठाइयो । त्यसमा उनको टिम च्याम्पियन भयो । उनले राम्रो खेलेका थिए । त्यसबेला त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि राम्रो खेलाडी खोजीरहेको थियो । त्यसैले उनलाई सैन्य तालिमपछि सीधै क्लबमा काठमाडौं पठाइयो ।
उनी तत्कालीन प्रशिक्षक डम्बरसिंह गुरुङको नजरमा परिहाले । त्यही बेला मिडफिल्डर सन्तोष नेपाली शान्ति सेनामा बिदेश गएका थिए । त्यसैले उनले ‘प्लेइङ सेट’मै रहेर सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०६६–६७ मा डेब्यू गरे । उनको फुटबल करिअर त्यहीबाट उकालो लागेको हो ।
सन्तोष फर्केपछि अर्का मिडफिल्डर राजु तामाङ शान्ति सेनामासमावेश भए । त्यसैले नवयुगले निरन्तर पहिलो रोजाइमा मौका पाए । डम्बरसिंहपछि योगम्बर सुवाल हुदै अहिले मेघराज केसी आर्मीको मुख्य प्रशिक्षक छन् । नवयुग उनीहरु सबैको रोजाईमा परे । उनलाई राष्ट्रिय टिममा ध्रुव केसीले ‘ब्रेक’ दिए । त्यसपछि प्याट्रिक ओसेम्सले पहिलो रोजाईमा राखे । बंगबन्धु गोल्डकपका लागि प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले उनलाई भरपर्दा फरवार्डका रुपमा प्रयोग गरे ।
सागमा २३ वर्षपछि नेपालले स्वर्ण पदक जिताउन पनि उनले प्रशिक्षक राजु शाक्यको टिममा महत्वपूर्ण योगदान दिए । नेपालका दुई सफल कप्तानहरु बालगोपाल र राजु दुवैको प्रशिक्षक करिअरमा सबभन्दा ठूला सफलता दिलाउन नवयुग सफल रहे । र, नवयुगको यो सफलतासँगै नेपाली फुटबलमा नवयुगको शुरुवात भएको मानिएको छ ।